Sheekada filimka Baaghi 2: Tiger Action-kiisa ayaa mada daalo kuugu filan kuna raali galin doono – Filimside.net
Sheekada filimka Baaghi 2: Tiger Action-kiisa ayaa mada daalo kuugu filan kuna raali galin doono
Taariikhda: March 30, 2018
Tiger Shroff waa jawaabta aad u baahneyd “Bollywood-ka Atoore Action Hero Goormee Helayaan, Kadib Raggii 90-maadkii”
Jilaayaasha filimka Baaghi 2:Tiger Shroff, Disha Patani, Randeep Hooda, Manoj Bajpayee, Prateik Babbar, Deepak Dobriyal.
Qiimeynta Fariintiisa: 3/5 (Sedex xidig)
Muxuu Ku Wanaagsan Baaghi 2: Action dhan walbo ka dheeli tiran, Tiger Shroff libaaxnimadiisa dhanka Action-ka, iyo qaabka fariinta loo dhigay qaybta dambe.
Muxuu Ku Liitaa Baaghi 2: Sheekadiisa xoogaa habac sanaan weyn ayaa ka muuqato si gaar ah halka saac hore, sidoo kalena Action-ka ayaa xooga la saaray halkii fariinta siweyn loo tayeyn lahaa.
Daawo Ama Ha Daawanin: Baaghi 2 yuusan ku dhaafin waayo Action heer sare ah oo mudo dheer kuugu dambeesay ayaad ku raaxeesan doontaa haddii filimkan aad daawatid, hadaad iska dhaaftid waxaa ka xumaan doontaa in lagaaga sheekeeyo waxa Tiger sameenayo!
Fariinta Filimka Baaghi 2 Oo Kooban: Neha (Disha Patani) waxaa jir diliayaan labo tuugo ah sidoo kalena gabadheeda ayay ka af duubanayaan.
Neha (Disha Patani) waxay garab weydiisanee Ronnie (Tiger Shroff) oo ayasan afar sano is arkin sidoo kalena jaceyl ka dhaxeyn jiray xili hore waana askari Kashmir ka hawl galo.
Ronnie (Tiger Shroff) ayaa marka hore ka madax adeegayo inuu jaceylkiisii hore garab siiyo kadib markii Neha seygeeda Shekhar (Darshan Kumaar) oo wax badan ka ogaanayo.
Inta uu Ronnie (Tiger Shroff) ku guda jiro baadi goobka gabadha yar wuxuu la kulmaa halis badan asigoo booliska garab ka weynayo sidoo kalena ogaanayo kiiskan inuu siyaasiyiin waa weyn lugaha la galaayo.
Haddaba Ronei (Tiger) dib ma ugu soo celin doonaa jaceylkiisa hore gabadha ka maqan sidoo kalena wax badan oo ka qarsoon marka uu ogaado halista dhan walbo kasoo wajaheyso siduu kaga guuleesan doonaa?
Maxaa Laga Yiri Sheekada Filimka Baaghi 2: Filimkaan malahan fariin adag balse Director Ahmed Khan wuxuu ku guuleestay diyaarinta Action heer sare ah asigoo Tiger Shroff xirfadiisa Action-ka si wacan kaga faa’iideestay.
Baaghi 2 halkiisa saac hore ma adko balse halka saac dambe Action-ka, qayaanada iyo qiirada uu leeyahay ayaa filimkaan ka dhigtay in lagu raaxeesan karo daawashadiisa.
Bandhiga Jilaayaasha: Tiger Shroff wuxuu kusoo baxay atoore xirtay darajada Action Hero mana jiro jilaa dhalinyar oo booskan ku cariiran karo, atoorayaashii 90-maadkii Bollywood-ka Action-ka kusoo galeen maanta Tiger ayaa badalay.
Tiger bandhigiisa Baaghi 2 waa mid uu shacbiyad balaaran ku helay sidoo kalena wuxuu noqday xidig dhameestiran oo miisaankiisa fanka siweyn u kobcay.
Disha Patani waa atirisho qurux badan sidoo kalena Tiger ay isku soo baxayaan balse Baaghi 2 door heer sare ah lagama siinin muuqaal ahaana wey ku yar tahay.
Randeep Hooda doorkiisa askariga daroogada adeegsado waa mid wacan oo kusoo jiidanaya filimkana xiiso u yeelay sidoo kale Manoj Bajpayee oo ah laadarka ugu weyn filimka isagana door dagan oo qayaanadiisa badan ayuu qaatay wuuna ku amaanan yahay.
Gunaanad: Baaghi 2 waa filim Action dhameestiran leh kuna fara yareestay Tiger dhan walbo sidoo kalena labo heer shidan leh sidoo kalena jilaayaasha kale ee doorar kala duwan ku leh filimka xiiso gaar ah u yeeleen.
Sidaa darteed waa hubaal in fagta hore sedexda maalmood ee ugu horeyso wacdaro lixaad leh inuu Boxoffice-ka ka dhigi doono kadibna waxaa la wada dhowri doonaa sida fariintiisa isku dhafan qeybna ka wanaagsan qaybna ka liidato daawashada usoo dhaweeyaan.
Fadlan hoos kaga bogo goos gooska filimka Baaghi 2:
Waxaa Aqrisay 1,584